Shiinaha RXY Taxanaha Wash-nadiifinta-Buuxinta-Khatimidii Line saaraha iyo qeybiye | Shinva
Taxanaha RXY Wash-jeermiska-Buuxi-Khatimidii Line
Khadka Waxsoosaarka Waxyaabaha Wash-Qallalan-Buuxi-Khatimidda waxaa loo isticmaalaa dhaqidda, nadiifinta, buuxinta iyo xiritaanka cirbadda mugga yar ee ku jirta aqoon isweydaarsiga. Waxay ka kooban tahay naqshad casri ah, qaab-dhismeed macquul ah, heer-sare otomaatig ah, hawlgal xasilloon oo lagu kalsoonaan karo, wax-soo-saar sare oo wax soo saar iyo is-dhexgal farsamo iyo koronto. Qaybaha lala xiriiray dareeraha dawada waxay ka samaysan yihiin AISI316L halka qaybta kalena ay ka samaysan yihiin AISI304. Qalabka la isticmaalay kuma laha wasakhda daroogada iyo deegaanka.
Faahfaahinta weelka: 1ml-100ml
Awoodda wax soo saarka: 10-500 fijaan / daqiiqo
Buuxinta saxnaanta: ≤ ± 1%
Maydhashada Xiinka + Biyaha-Hawada oo talantaalli ah oo loo maydho
Noocyada qaybaha muhiimka ah: SIEMENS, GEMU, FESTO, ABB, Schneider, iwm.
Astaamaha Waxqabadka Ugu Muhiimsan
* Khadka Waxsoosaarka Waxyaabaha Wash-Qallalan-Buuxi-Khatimidda waxaa loo isticmaalaa dhaqidda, nadiifinta, buuxinta iyo xiritaanka cirbadda mugga yar ee ku jirta aqoon isweydaarsiga. Waxay ka kooban tahay naqshad casri ah, qaab-dhismeed macquul ah, heer-sare otomaatig ah, hawlgal xasilloon oo lagu kalsoonaan karo, wax-soo-saar sare oo wax soo saar iyo is-dhexgal farsamo iyo koronto. Qaybaha lala xiriiray dareeraha dawada waxay ka samaysan yihiin AISI316L halka qaybta kalena ay ka samaysan yihiin AISI304. Qalabka la isticmaalay kuma laha wasakhda daroogada iyo deegaanka. Naqshadeynta guud iyo wax soo saar waxay la jaan qaadayaan FDA iyo GMP-da cusub.
* Khadka Waxsoosaarka Weelka Wash-Qallalan-Buuxi-Khatimidda wuxuu ka kooban yahay Mashiinka Dhaq-dhaqaaqa Ultimate Ultimate, Qallajinta iyo Foornada Taranka, iyo Mashiinka Buuxi-Khatimidii Weelka Waxay leedahay isdhexgalka isuduwidda, xakamaynta xawaaraha stepless iyo xakamaynta saxda ah waxayna la kulmi kartaa shuruudaha habka wax soo saarka.
* Waxay ka muuqataa xawaaraha wax soo saarka sareeya, heerka u qalmida sare, wax saameyn ah ma leh, ficil qaldan ma leh, maroojin iyo fijaanno jaban.
* Waxay ku qalabeysan tahay aalado nabadgelyo oo kala duwan si loo hubiyo badbaadada wadaha iyo mishiinka.
* Dekedaha ansaxinta waxaa lagu keydiyaa qeybaha waaweyn.
* Waxay ka kooban tahay xakamaynta PLC, hawlgalka shaashadda taabashada iyo wax soo saarka barnaamijka.
* Aaladaha wax lagu kaydiyo ayaa lagu rakibay barta isku xirnaanta ee udhaxeysa seddex cutub oo xariiqda wax soo saarka ah, sidaas darteedna awood u leh inay hubiso hawlgal lagu kalsoonaan karo oo deggan.
* Waxay leedahay shaqeenta dhalo la'aan buuxinteeda.
* Waxay leedahay nidaamka sahayda saliida oo udub dhexaad u ah kaas oo si fudud saliida ugu dari kara barta dhibcaha.
Hore: Qalabaynta Xiinka Qalabka Xiinka Ultimate
Xiga: XH507 Qaybta Ilkaha
LM Taxanaha Qalajiyaha
Nidaamka otomatiga ee GV